Trump Oo Shaqada Ka Eryay Lataliyihiisa Dhanka Amniga. – Bogga Calamada.com
Trump Oo Shaqada Ka Eryay Lataliyihiisa Dhanka Amniga.
War qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu Trump ku sheegay in uu ku casilay lataliyihii amniga qaranka Mareykanka ninka lagu magacaabo Herbert McMaster kana mid ahaa xisbiga Jamhuuriga.
Sarkaalka la eryay ayaa xilka qaadistiisu waxay aheyd mid lama filaan ah waxaana lagu bedelay John Bolton, oo kamid ahaa saraakiishii lasoo shaqeysay Maamulkii G.W.Bush xilliyadii uu xamlada saliibiga ah ku iclaaminayay wadamada caalamka islaamka.
Warbaahinta mareykanka ayaa sheegtay in eryidda Herbert McMaster ay dhabar jab weyn ku tahay siyaasadda lagu maamulo aqalka cad oo 14-kii bilood ee lasoo dhaafay wajahaysay qulqulatooyin.
Lataliyaha cusub ee amniga qaranka Mareykanka ayaa horay usoo noqday safiirka washington u fadhiya xarunta waxa loogu yeero Q.midoobe sidoo kale wuxuu kamid ahaa dagaal huriyayaashii dhanka diblumaasiyadda xilligii G.W Buush.
Saxafiyiinta ayaa tallaabadan uu qaaday Trump ku tilmaamay mid qar iska xoornimo ah marka loo eego qaabka uu u maamulayo wadanka, majirin wax wareegta ah oo uu soo saaro marka uu xilal magacaabayo iyo marka uu mas’uuliyiin casilayo balse farriimo uu ku faafiyo baraha bulshada ayuu u adeegsadaa xilka qaadista arrintaas oo lagu sifeeyay fadeexad dhanka maamulka ah.
isbuuci lasoo dhaafay ayuu eryay Rakis Tillerson oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda xilli uu booqasho ku marayay qaar kamid ah wadamada dhaca qaaradda Afrika.
Eryidda Herbert McMaster ayaa ka dhigan lataliyihii 3-aad ee dhanka amniga ah ee Trump uu waayo, horay waxaa isku casilay laba lataliye oo uu ugu caansaa Maykal Filin oo ku lug lahaaday fadeexad ah faragelinta dowladda Ruushka ay ku sameysau doorashooyinkii madaxtinimada mareykanka.